Dhalinyaro Baratay Farsamada Gacanta oo Shahaadooyin lagu gudoonsiiyay Garoowe – SBC
Dhalinyaro Baratay Farsamada Gacanta oo Shahaadooyin lagu gudoonsiiyay Garoowe
Posted by Webmaster on Diseenbar 2, 2012 Comments
Hoolka PDRC Garowe shahaadoyin lagu gudoonsiiyay 40 arday kuwaas oo dhamaystay tababar saddex bilood ah oo lagu barayey Faryaamada ,Fuudnimada iyo koronta dugsiga farsamada gacanta Garowe ee (GVTC).
Mashruucan oo NCA kala kaashaneyso wasaarada Cadaalada ayaa saddex sano ee la soo dhaafey ayaa waxa ka qaybgalay dhalinyaro laga keeney deegaan xeebeedyada Bossaso ,Baargaal, Bandar Beyl ,Xaafuun iyo Eyl ,waxana looga danleeyahay dhalinta in laga jeediyo falalka amni darro oo burcad badeedu ugu horeyso.
Munaasabadaan qalinjabinta ayaa waxa ka soo qayb galay ,wasaarada cadaalada Puntland, tan waxbarshada, wasiirka maamul wanaaga ,macaahida waxbarashada,hayada NCA , ganacsatada ,ardyada dugsiga ka qalinjabinayay iyo marti kale oo la casumey.
Eng.Maxamed Diiriye Laalac madaxa dugsiga farsmada gacanta ayaa sheegay in dugsigu door wayn ku leeyahay soo saarista dhalinyarada xirfada taqaan Puntland oo qayb ka yihiin 40-ka maanta shahaadooyinka la siinayo.
Agaasimaha Waaxda mashaariicda iyo tababarada Maxamed Cali Faarax ayaa tilmaamey in deegaanada Puntland ka hirgalinayan inta uusan dhamaan sanadkan waxbarashada farsamada gacanta ayna wax ku bari doonaan dhalinyarada xirfado noloshooda ku maareeyaan.
Wasiirka Cadaalada Dr,Cabdi khaliif Ajaayo iyo wasiiru dowlaha maamul wanaaga Maxamed Faarax Ciise Gaashaan ayaa soo dhoweeyey mashruucan xirfada gacanta lagu barayo dhalinta.
Shirkada Korontada NEC ayaa balanqaadey xaflada inta ay socotey inay shaqaaleysiin doonto dhalinyarada baratay koronta halka kuwo kalena ay horey uga shaqeyn jireen.
Shantii sanno ee la soo dhaafey waxa si weyn Puntland uga socdey mashaariicda dhalinta shaqo xirfado loogu abuurayo si aysan ugu biirin falalka burcadbeednimada tahriibta iyo amni darada
Hoolka PDRC Garowe ayaa maanta 29 November,2012 shahaadoyin lagu gudoonsiiyay 40 arday kuwaas oo dhamaystay tababar saddex bilood ah oo lagu barayey Faryaamada ,Fuudnimada iyo koronta dugsiga farsamada gacanta Garowe ee (GVTC).
Shantii sanno ee la soo dhaafey waxa si weyn Puntland uga socdey mashaariicda dhalinta shaqada loogu abuurayo waxana wasaaradaha dhalinayrada iyo waxbarashada gacan ka siiya hayadaha caalamiga ah.